ड्युटीकै क्रममा बोलेरो जिप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरीलाई शोक सलामी – Dainik Sangalo
ड्युटीकै क्रममा बोलेरो जिप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरीलाई शोक सलामी
August 21, 2020 668
पोखरा, ५ भदौ । पोखरामा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका दुई प्रहरीलाई शोक सलामी अर्पण गरिएको छ । पोखरा ५ मालेपाटनमा बुधवार ड्युटीकै क्रममा बोलेरो जिपले ठक्कर दिँदा प्रहरी हवल्दार डम्बरबहादुर थारु र प्रहरी जवान चन्द्रबहादुर बगाले घाइते भइ उपचारका क्रममा ज्यान गएको थियो ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको प्रांगणमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख तथा डिआइजी घनश्याम अर्यालको उपस्थितिमा शोक सलामीसहित श्रदान्जलि व्यक्त गरिएको हो । डिआइजी अर्यालले प्रहरी संगठनको झण्डा ओढाई पुष्पगुच्छासहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे ।
इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी कर्मचारीलाई गुमाउँनु पर्दा नेपाल प्रहरी संगठनलाई क्षति पुगेको डिआइजी अर्यालले बताए । शोक सलामी कार्यक्रममा संघीय प्रहरीइकाइ कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख लगायतको उपस्थित थिए ।
मोटरसाइकलमा गस्तीको क्रममा बागलुङ बसपार्कबाट जिरो किमी जाने क्रममा सोही दिशाबाट आउँदै गरेको बलेरो जिपले पछाडीबाट ठक्कर दिएको थियो । ठक्करबाट गम्भीर घाइते दुवै जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । बर्दिया बढैयाताल का ३४ वर्षीय प्रहरी हवल्दार थारु २०६२ असारमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
Prevकाठमाडौंमा भयाभह बन्दै कोरोना , शिक्षण अस्पतालका १३ डाक्टरसहित ७० जनामा देखियो कोरोना
Nextएम्बुलेन्स भाडा २ हजार तिर्न नसक्दा ३२ वर्षीया महिलाको मृत्यु
बुहारी विनालाई प्रदेश अध्यक्ष बनाउदै प्रचण्ड ! मन्त्री पद दावी गर्दै उत्सव र तारामान
किशोर र किशोरी जङ्गल गए, सबैलाई चकित पार्दै भेटिए यस्तो अवस्थामा
प्रहरीले समाएको १५ किलो सुनमध्ये आधा किलोमात्रै सक्कली कसरी भयो ?
थप एक साता निषेधाज्ञा : टेम्पो र माइक्रोबस पनि चल्ने, जोर बिजोर प्रणाली हटाइयो